नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : किन विवादित निर्णय लिन आफै अग्रसर हुनुपर्यो सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ? अब कहिले र कुन प्रकियाबाट संविधान आउंछ ? देशमा थप द्वन्द्व बढ्दा त्यसको दोष सुवास नेम्वाङले लिनुपर्छ ?
किन विवादित निर्णय लिन आफै अग्रसर हुनुपर्यो सभाध्यक्ष नेम्वाङलाई ? अब कहिले र कुन प्रकियाबाट संविधान आउंछ ? देशमा थप द्वन्द्व बढ्दा त्यसको दोष सुवास नेम्वाङले लिनुपर्छ ?
Posted by www.Nepalmother.com at 1:43 PM